Kyrgyzstan: Mihamafàna ny Vanim-potoana Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 2:27 GMT
Miady hevitra mikasika ny fiovàna ataon'ny governemanta taorian'ireo fanesorana tampoka nataon'ny Filoha Bakiev sy ny fanendrena antokon'olona manan-danja eo amin'ny fanjakana. Nanintona ny sain'ny blaogera foana ny fanendrena vaovao sy ny fandroahana vao haingana ireo manampahefana, blaogera izay maneho sy mizara tsy tapaka ny heviny ary maminany hoe iza no hanao inona ary inona no hitranga aorian'izany.
Tsy nampoizina ny fanapahankevitra vao haingana noraisin'i Bakiev handroaka ilay praiminisitra Almazbek Atambaev, izay taorian'ny naha-mpikambana mpanohitra mahery azy, dia lasa praiminisitra ary niasa valo volana monja. Niteraka resabe sy famoronana teny anivon'ireo blaogera izay antony nanaovan'ny filohan'ny fanjakana izany. Natao tao amin'ny blaogin'i Edil Baisalov ilay resabe, izay mpikambana ao amin'ny Antoko Sosialy Demokratika. Mino i Baisalov, filohan'ny antoko, fa naniry ny handroaka ilay praiminisitra ny filoha satria ho azy i Atambaev dia loza mitatao goavana ho an'ny fifidianana manaraka satria tsy tiany ny hisian'ny familiviliana ireo manam-pahefana hitranga izy. Nitsikera ny politikan'ny filoha manoloana ny fifidianana i Atambaev, ary mazava ho azy fa tsy nankasitrahan'ny filoha izany ary naniry ny hanaisotra azy izy, hoy i Baisalov [ru].
Maneho hevitra momba izany i Anonymous:
3 miampy iray vaovao – be loatra izany praiminisitra efatra ao anatin'ny roa taona sy tapany izany. Marika famantarana ve izany fa tsy afaka mifandray tsara amin'ny olona miara-miasa aminy ny filohantsika? Aiza ny traikefam-pitantanana ananan'ny mpitarika ity firenena ity?
Milaza i Tarantino:
Tokony ho takatr'i Atambaev fa nanala baraka ary naneso azy teo imason'ny vahoaka manontolo ny filoha. Raha ny marina dia mendrika sazy toy izany i Atambaev.
Ankehitriny, rehefa voaroaka i Atambaev ary efa nalefa any amin'ny Kaomity Foibem-pifidianana ireo lisitry ny antoko, sady very seza ao amin'ny fanjakana izy no sady very seza ao amin'ny parlemanta ihany koa. Am-piresahana mikasika ireo antoko politika maro sy fifidianana ho avy, miresaka am-pahavitrihana momba ny antoko tsirairay ireo blaogera, ny sehatra misy azy, ary indrindra ny mpikambana ao aminy, izay ao amin'ilay lisitry ny fifidianana ny anaran'izy ireo. Efa samy mikarakara mafy ny fampielezankevitra mialohan'ny fifidianana ny antoko tsirairay. Mizara fitaovana fanetsiketsehana izy ireo amin'izao ary mampiasa ny fomba rehetra mba hanaovana fampielezan-kevitra manatona vahoaka. Nametraka fetra amin'ny fomba sy ny fitaovana azo ampiasaina mandritra ireo fihetsiketsehana ho an'ny vahoaka ireo ny manampahefana eo anivon'ny fanjakana. Ohatra, noraràny ny fampiasana fanamafisam-peo, izay niteraka tsikera be dia be ary hetsi-panoherana teo anivon'ireo antoko.
Toy izao ny fomba fihetsik'i Baisalov:
Ho hitrikitrihan'ny antokonay ny amin'ny fampiasana fanamafisam-peo mandritra ny fampielezankevitra fanetsiketsehana. Tsy misy iraharahiako ireo izay tsy miombon-kevitra amin'izany. [ru]
Tsy mankasitraka ny hevitr'i Baisalov i Part7. Manohy amin'ny fitsikerana izy:
Feno fomba maro hafa ahafahanao mapahafantatra ny antokonao, toy ny fanontàna bokikely, fanaovana fampielezankevitra ho an'ny mpianatra sns… Fa manakorontana ny olona ny fampiasana fanamafisam-peo ary miteraka tabataba be fotsiny.
Niarahana namoaka amin'ny neweurasia.